Madagasikara: Fiarahamonina, Maha-izy Azy Ary Ny Zanaka Ampielezana Malagasy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2017 5:17 GMT
Miitatra ao Saigon ka hatrany Vancouver ny tontolon'ny blaogy malagasy miaraka amin'ireo manda mahazatra toa an'Antananarivo, Parisy, Roma, Zenevy, Washington DC, sy Montréal. Amin'ny teny malagasy, frantsay, anglisy na italiana no hifampitohizan'ny resaka. Ankehitriny, misy ireo malagasy mpitoraka blaogy fantatra toy ny mpikatroka, ny sasany mpanaramaso. Ny blaogy sasany dia manana ny maha-izy azy manokana, ny sasany misokatra kokoa ho an'ny fiarahamonina. Kanefa, matetika miverina eo amin'ny fanontaniana ny maha-izy azy ny kolontsaina ny resaka, indrindra ho an'ireo fiarahamonina any am-pitandranomasina. Nisy fihaonambe ara-panatanjahantena iray nokarakaraina tao Washington, D.C izay nanasàna ny Malagasy rehetra mipetraka any Amerika Avaratra ho aminà fifaninanana am-pirahalahiana taminà taranjam-panatanjahantena maro isan-karazany.
Mitantara i Sipakv:
Manontany ny fiarahamonina Malagasy ny antony nahatonga azy ireo haniry ny handao ny firenena na hanapaka hevitra ny hiverina ao i Tattum:
Farany, nanasa ny fiarahamonina mba handray anjara tamina hetsika fanangonambola ho an'ny ankizy ao Madagasikara i Jogany sy i Harinjaka tamin'ny Asabotsy 28 Jolay tamin'io taona io.